मापसेपछि किन हुन्छ ह्याङओभर ? - Postmandu
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा मानिसको रोजाइमा छ, मदिरा। दुःख बिर्सिने र खुसी बाँड्न अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गर्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण टाउको दुख्‍ने, रिंगटा लाग्‍ने, वान्ता हुने, मुख सुक्नेलगायत समस्या उत्पन्‍न हुन्छ। त्यसलाई बोलीचालीमा ‘ह्याङओभर’ भन्ने गरिएको छ।
ह्याङओभरबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्‍ने समस्या आजको भने होइन। इजिप्टमा भेटिएको १९०० वर्ष पुरानो एउटा भोजपत्रमा यसबाट मुक्ति पाउने उपाय लेखिएको थियो।
तर आज पनि ह्याङओभर हटाउने अनेकौं उपायहरू बताइन्छ। जस्तै क्यानरी भनिने चराको भुटेको मासु खानु, काँचो अण्डा खानु, गोलभेंडाको रस पिउनु, सस वा त्यस्तै चिज मिलाएर तयार पारिएको ओइस्टर खानु – आदि।
रमाइलो कुरा के छ भने यीमध्ये कुनै पनि उपायले धेरै रक्सी पिएर हुने ह्याङओभर समस्याको समाधान गर्ने निश्चित छैन। निश्चित समयपछि यो समस्या आफै हराउँछ। त्यस अर्थमा समयसँगै ह्याङओभर हटेर जान्छ।
यसको मुख्य कारण के हो भने आजको दिनसम्म ह्याङओभर किन हुन्छ भन्‍ने स्पष्ट थाहा भइसकेको छैन।
ह्याङओभरको प्रभाव महिलामा बढी हुन्छ?
ह्याङओभरको प्रभाव महिलामा बढी हुन्छ। यदि महिला र पुरुषले उत्तिकै मदिरा सेवन गर्छन् भने पनि त्यसको प्रभाव पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी हुने गर्छ।
महिलाको तुलनामा पुरुषको शरीरमा पानीको मात्रा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण उनीहरुले सेवन गरेको मदिरा शरीरमा छिटै घोलिन्छ। महिलाको शरीरमा भने मदिरा रगतमा गएर मिसिन्छ।
ह्याङओभरका लागि अत्यधिक मदिरा सेवन गर्नुपर्दैन। कसै-कसैलाई थोरै रक्सी खाँदा पनि ह्याङओभर हुनसक्छ। मान्छेले आफूले खाएको रक्सी कति पचाउन सक्छ भन्ने कुराले त्यसको निर्धारण गर्छ। बियर, या हार्ड डि्रंक्सको साथमा पानी वा अन्य पदार्थको सेवनले हाइड्रेटेड रहन र शरीरबाट अक्कोहलको मात्रा घटाउने सुझावहरु पनि दिइन्छन्।
ह्याङओभर किन हुन्छ त?
कडा रंगका रक्सीमा यसको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले बर्बन पिउँदा उत्तिकै भोड्का पिएभन्दा बढी ह्याङओभरको अनुभूति हुन्छ। तर यसको असर व्यक्तिपिच्छे फरकफरक हुन्छ। साथै पिउनुको असर वा ह्याङओभर पनि पिउने मानिसको उमेर र पिएको मात्रा अनुसार भिन्‍न हुन्छ।
वास्तवमा कुनै एउटा मात्रै कारणले ह्याङओभर हुँदैन। यसका विविध कारणहरू हुन्छन्। रक्सी पिउँदा हाम्रो शरीरमा हर्मोनको सन्तुलन खलबलिन्छ। यसबेला मानिसहरू अरुबेलाभन्दा धेरै पिसाब गर्न थाल्छन्। यसले उनीहरूको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन पुग्छ।
टाउको भारी हुनु वा दुख्नु योसँग पनि सम्बन्धित छ। मदिरासेवनले निद्रामा पनि असर गर्छ। प्राय: मानिसहरू राति अबेरसम्म मदिरा पिउँछन्। जसको परिणामस्वरूप उनीहरू पर्याप्त सुत्न पाउँदैनन्। यसैकारण पनि उनीहरू थकान अनुभव गर्छन्।
नेदरल्यान्ड्सको उत्रेख्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योरिस सी वेर्सटर भन्छन्,’धेरै रक्सी सेवन गरेपछि हाम्रो शरीर त्यससँग लड्न थाल्छ ताकि त्यसले हाम्रो शरीरमा धेरै खराबी नगरोस्। त्यसै कारण पनि मानिसहरू धेरै पिएपछि अल्मलिएको जस्तो देखिन्छन्।’
केही मानिसहरू अण्डा खाने सल्लाह दिन्छन्। अण्डामा हुने एमिनो एसिड भनिने रसायन एसिटेल्डिहाइड टुक्र्याउन प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अण्डा खाएर राहत मिल्छ भनिन्छ। तर त्यस्तो तत्त्व त अन्य खानामा पनि पाइन्छ। अहिलेको लागि भने रक्सी धेरै पिएर हुने समस्याबाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको आराम गर्नु, धेरै पानी पिउनु र एक चक्की एस्पिरिन लिनु हो। रक्सी पिउनुपूर्व राम्रोसँग खानेकुरा खानु र रक्सी पनि विस्तारै विस्तारै पिए ह्याङओभर कम हुन्छ। र, सबभन्दा राम्रो उपाय त धेरै रक्सी नपिउनु नै हो।
कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति-१ तनहुँको कोषाध्यक्षमा भट्टराई र प्रवक्तामा मिश्र
जडिबुटीको राजा शिलाजीतका यस्ता छन् फाइदा
2021-05-20 2021-05-25 Postmandu
डन्डिफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसो गर्नुहोस्